I-Open Collective and Anartist: Amawebhusayithi Wamasiko Akhululekile Navulekile Wamasiko | Kusuka kuLinux
I-Open Collective and Anartist: Amawebhusayithi Wamasiko Akhululekile Navulekile Wamasiko
Namuhla sizokwazi 2 amawebhusayithi athakazelisayo ngaphezulu, bayingxenye enkulu umphakathi online lokho kukhuthaza a isiko elikhululekile nelivulekile, umbono ohlukile we bona, cabanga futhi wenze izinto ezithile noma izimo. Lawa mawebhusayithi amasha we-2 okufanele abuyekezwe yilawa: «Vula Okuhlangene » y «Anartist ».
Kafushane, «Vula Okuhlangene » igxile ekuxhasweni ngemali, okuwukuthi, ekusizeni amaqembu abambisanayo ukukhulisa nokusebenzisa imali ngokusobala. Ngenkathi, «Anartist » Igxila kakhulu kumasiko, okungukuthi, ekunikezeni amalungu ayo, imvamisa avela emikhakheni yezobuciko namasiko, amathuluzi wamahhala adingekayo ukwenza umsebenzi wabo.
I-SUChat: Insizakalo yemiyalezo esheshayo yomphakathi
Ngaphambi kokuba ngiqale ukukhuluma ngakho «Vula Okuhlangene » y «Anartist », njengenjwayelo, sizoncoma ezinye okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene namawebhusayithi amasha amnandi esiwabukezile. Ukuba owethu wokugcina, iwebhusayithi «SUChat ”, esiyichaza ngokuthi:
"Insizakalo yokuthumela imiyalezo esheshayo yomphakathi esuselwa kunqubo ye-XMPP, ehlonipha ubumfihlo bakho futhi evumela ukuxhumana kwesikhathi sangempela nabangani bakho nomndeni wakho ngaphandle kokukhathazeka ngokuphepha nobumfihlo. Dala i-akhawunti, landa iklayenti elisekela iJabber / XMPP, engeza abangani futhi ukhulume ngokukhululeka ngokuphepha okuphelele." I-SUChat: Insizakalo yemiyalezo esheshayo yomphakathi
Okunye okwedlule kube:
1 Vula okuqoqiwe kanye ne-Anartist
1.1 Yini i-Open Collective?
1.1.1 Isebenza kanjani?
1.1.2 Amawebhusayithi ahlobene
1.2 Yini i-Anartist?
Vula okuqoqiwe kanye ne-Anartist
Yini i-Open Collective?
Ngokwakho Iwebhusayithi esemthethweni, ichazwa njenge:
"Ipulatifomu yezimali eku-inthanethi yemiphakathi evulekile nebala. Lokho kunikela ngamathuluzi adingekayo wokuqoqa nokwabelana ngezimali eziqoqwe ngokusobala okuphelele."
Lokho wukuthi, bayi- iwebhusayithi ekahle eyiphi imiphakathi (amaqembu wokubambisana, imihlangano, amaphrojekthi wemithombo evulekile, phakathi kokunye) ukukhulisa nokukhipha imali ngendlela esobala ukuze kuzuze amalungu ayo kanye namaphrojekthi abhalisiwe, phakathi kwalabo abafuna ukuwasekela.
«Vula Okuhlangene » imvamisa yehluka kwamanye amapulatifomu afanayo, njengoba inikezela ngefayela le- ukwenza izinto obala ngokugcwele kwezezimaliNgamanye amagama, ungabona ukuthi imali ivelaphi nokuthi iya kuphi. Ngokwengeziwe, yakhelwe imiphakathi eqhubeka nokuthuthukisa imikhiqizo, hhayi abadali abangabodwana noma abadali bomkhankaso owodwa.
Ekugcineni, isiza sizixhasa ngezimali ngamaphesenti amancane kuphela emali etholwe endaweni yesikhulumi, ephakathi kuka-5% no-10%, ngokuya ngesikhungo sayo sezimali. Futhi kuyo, noma ngubani anganikela kusuka noma yikuphi ngekhadi lesikweletu elilula lamazwe omhlaba, noma ngeminikelo ekhonjiswe kwimali yoMgcini Wezimali. Abathuthukisi bayo baphinde banikeze imininingwane yokuthi izinkokhelo zisebenza kuzo zonke izindawo lapho abahlinzeki babo bokukhokha, iStripe nePayPal, behlinzeka khona ngosizo.
Lo Mphakathi nawo unamanye amawebhusayithi athakazelisayo, ngaphakathi kwe- Vula Umsingathi Ohlanganyelwe, phakathi kwazo kuvela ezinye ezihlobene ngqo neFree Software, Open Source ne-GNU / Linux, futhi singasho:
Umthombo Ohlanganyelwe: Isebenza njengomgcini wezimali ongenzi nzuzo okhuthaza uhlelo lwemvelo oluvulekile olunempilo nolusimeme.
Vula iYurophu Ehlangene: Yikuphi okusebenza njengenhlangano engenzi nzuzo ezinze eBrussels ukusingatha amaqembu avulekile avela kulo lonke elaseYurophu.
IMidwest Open Source Alliance: Yimiphi esebenza njengenhlangano ekhuthaza ukufundiswa, ukwesekwa kanye nokuthuthukiswa kweDrupal kanye nesoftware yomthombo ovulekile ehlobene nayo ngaphakathi komphakathi waseDrupal waseMidwest e-United States of America.
"Ipulatifomu ephethwe ngabaculi nangabaculi. Futhi izinhloso zazo yilezi: Ukwakha ipulatifomu ekusetshenzisweni kwezidingo zabaculi, ukunikezela amandla embonini yamasiko, ukusungula izikhala zenkulumompikiswano, ukufunda nokusekelana phakathi kwabaculi, nokwakha isiko lamahhala nelinokuziphatha lokuguqula ezenhlalo."
Futhi bayingxenye ye- «Vula Okuhlangene », engabonakala ngokuchofoza okulandelayo isixhumanisi.
Ekugcineni, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi uMphakathi wale webhusayithi une- umgomo oyinhloko Okulandelayo:
"Sizinikeze amathuluzi wokulwa nobungxiwankulu silandela imigomo yesiko lamahhala. Sifuna ukuzikhulula ezinkampanini ezizimele ezilawula futhi eziqaphe uquqaba. Ngalesi sizathu, kumaseva ethu sifake (futhi sizofaka) amathuluzi esiwadinga ukusebenza nokusabalalisa ubuciko bethu."
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" kumawebhusayithi ama-2 athakazelisayo we «Open Collective y Anartist», abayingxenye yoMphakathi omkhulu we-intanethi okhuthaza isiko elikhululekile nelivulekile, umbono ohlukile wokubona, ukucabanga nokwenza izinto ezithile noma izimo; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » I-Open Collective and Anartist: Amawebhusayithi Wamasiko Akhululekile Navulekile Wamasiko
Ukuhlaselwa kokuthembela kuvumela ukwenziwa kwekhodi ku-PayPal, Microsoft, Apple, Netflix, Uber nezinye izinkampani ezingama-30
Umthombo Ovulekile weGAFAM: Ama-Giant Technological asekela uMthombo Ovulekile